नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दुर्गा रायमाझी भन्छन ‘फर्कदाई फर्क, हाम्रै नेपाल जापान हुन्छ, दुई चार वर्ष पर्ख’ !
दुर्गा रायमाझी भन्छन ‘फर्कदाई फर्क, हाम्रै नेपाल जापान हुन्छ, दुई चार वर्ष पर्ख’ !
नेपाली लोकगीत, दोहोरी गीत, संगीत क्षेत्रमा कृयाशिल मेरा सहयात्री साथी दुर्गा रायमाझीको यो गीत सुने । गीत मिठो लाग्यो । साथीलाई बधाई पनि । गीत सुने पछि भन्न मन लाग्यो - साथी तपाईंले भनेझैँ दुई चार बर्षमा देश जापान जस्तो हुन सकोस, भैदियोस म पनि त्यही चाहन्छु । तपाईंको गीतमा आह्वान गरे बमोजिम बिदेशमा बस्ने हरेक हरेक नेपालीहरु पनि स्वदेश फर्कन र देशमै बसेर केही गर्न चाहन्छन तर हेर्नुस देशको दुर्दशा । यदी तपाईंले भनेझै सबै दाई भाई फर्के त्यहाँ हात मुख कसरी जोरिन्छन होला ! ८८४ जना साँसद कसरी पालिन्छन होला । केन्द्र र प्रदेशका ८ वटा सरकार कसरी पालिएलान ! ति बढी बढी कर असुल्ने गाउँ पालिका, नगर पालिका, कर कार्यालहरु, घुस्याहा र भ्रस्ट कर्मचारी, नेता देखी जालो भित्र रहेका अरु धेरैले के गर्लान ?? यि र यस्ता धेरै कुराहरु छन यद्यपी साथीको गीत सँयोजन, गायकी, भिडियो सबै थोकका लागि साथीलाई हार्दिक बधाई र यो गीतको पूर्ण सफलताको लागि
हार्दिक शुभकामना पनि । - रामप्रसाद खनाल
पुराना थुप्रै गीतका सर्जक रायमाझीले अहिले झण्डै एक दशकपछि नयाँ गीत सार्वजनिक गर्नु भएको हो । ‘बटौलीमा निम्तो छ मलाई ..’, ‘अचेल गाउँमा यस्तै छ साननानी…’, ‘भैँसी पालेर…’ जस्ता गीतका सर्जक रायमाझी गीत संगीत क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पुर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएका रायमाझी संगित तथा नाट्य प्रतिष्ठानका प्राज्ञसमेत हुनुहुन्छ । - अशोक घिमिरे , रासस